Eyelash Perm - Zvese zvaunoda Kuti Uzive | Bezzia
Susana godoy | 13/09/2021 10:00 | Runako
Eyelashes inofanirawo kugara ichivatarisira, nekuti ivo vachatipa isu kuwedzera kutaura kumeso uye nekuti chikamu chakakosha chayo. Naizvozvo, mukati memarapirwo atinozovawana, isu tine iyo eyelash perm. Iwe unogona kunge wakanzwa zvakawanda nezvake pari zvino.
Zvakanaka ikozvino isu tichajekesa kusahadzika kwese kunogara kuchigadzirwa kwakatenderedza. Sezvo kana uchida tora kutaridzika kusingaperi kuvonga eyelashes yako, ipapo iwe uri munzvimbo chaiyo. Une chokwadi chekufadza chero kwaunoenda neakakasharara maitiro.
1 Chii chinonzi eyelash perm?
2 Inoita kwenguva yakareba sei eyelash perm?
3 Ndeupi musiyano uripo pakati pekusimudza uye zvachose eyelashes
Chii chinonzi eyelash perm?
Tinogona kutaura kuti eyelash perm ndiwo mushonga unokombama. Ichokwadi kuti hatizovaone nemafungu, asi inodaidzwa kuti kukombama nekuti inoratidzira zvakanyanya kutaridzika nemhedzisiro yakakombama. Chaizvoizvo mhedzisiro ndeyekuti isu tichaona kuti eyelashes akareba sei.. Kune izvi, iwe unoda mhando yejelisi iyo ichagadzirisa maitiro pamwe nema curlers kana rollers. Zvese izvi kuve kwakakosha kunharaunda ino, hongu. Saka mhedzisiro yacho ichave yakareba uye yakawanda eyelashes echisikigo, kwenguva refu. Nekudaro, sekutaura kwatamboita pakutanga, zvinozoisa maziso ako zvakanyanya uye uchafadzwa nekupera kwenyama.
Inoita kwenguva yakareba sei eyelash perm?
Ichokwadi ndechekuti iko kurapwa kunoitwa mune ingangoita awa, asi ipapo kunogara kwenguva yakareba. Nekuti tinogona kupedza ingangoita mwedzi mitatu takapfeka mhedzisiro yeyelash perm. Ichokwadi kuti tabo nyowani dzichaonekwa panguva yese iyi. Saka mhedzisiro yacho inogona kusiyana zvishoma, sezvo mamwe achizopetwa uye iwo matsva asiri. Saka, mushure memwedzi yakati wandei zvinokurudzirwa kuti udzokere kunzvimbo yako yerunako kuti uipe ruoko nyowani. Iwe unotoziva kuti kana iko kurapa kwaiswa mhedzisiro inoonekwa nekukasira, saka iwe zvakare uchanakidzwa nekutaridzika kunoratidzika kwaunoda zvakanyanya.
Ndeupi musiyano uripo pakati pekusimudza uye zvachose eyelashes
Isu takatotaura kuti eyelash permiti kurapwa kuvapwanya. Chii chinoita semhedzisiro isu tine imwe yeayo inotaridzika inonzi XXL. Kana iwe uchitova neyelashes refu, ichave yakanakira iwe nekuti iwe unogona kuipa yakatonyanya chimiro uye mhedzisiro yacho ichave yakasikwa zvachose.
Chokwadi patinotaura nezvazvo kusimudzira eyelash tiri kutaura nezvekurapa kwevanhu vane eyelashes ipfupi. Nekuti maitiro aya anoita kuti vatambanuke asi kubva pamudzi chikamu, icho chinotisiyira isu iwo maitiro eiyelashes refu. Saka iyo mvumo ichavapa kupedzisa kwakakombama uye kusimudza kuchavatambanudza zvakakwana. Maitiro acho akasiyanawo, sezvo makurukisi uye gadziriso yekugadzirisa yaidikanwa muperm, asi mukusimudza, eyelashes akapatsanurwa, kutanga kubva pachigadziko chakaiswa munzvimbo yeziso.
Saka, tinogona kutaura izvozvo iwo ese akasiyana marapirwo, iyo iwe yaunogona kuyedza mune ese ari maviri kesi, nekuti iwe unofanirwa kuwana izvo iwe chaunonyatsoda kana izvo iwe chaunonyanya kufarira. Nekudaro, haifanire kunge iri chaiyo yako. Iwe unogona kusarudza kuti uzvibvumire iwe kutakurwa neese maviri kuti uone kuti ndeupi ane akanakisa mhedzisiro pachiso chako. Kubva pairi, izvo zvaunofanirwa kuita kushandisa imwe mhando yehydration kune eyelashes ako kutora maitiro, senge donhwe remafuta, hauzodi mascara nekuti chitarisiko chako chichava chakanaka choga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Perm eyelash: Zvese zvaunoda kuti uzive